Madaxweyne C/raxmaan Faroole Mas’uul waxqabadkiisu muuqdo – Puntland Voice
May 28, 2013 12:48 pm Views: 105
Tan iyo markii 4 sano ka hor uu xilka qabtay madaxweynaha Dowlada puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole waxaa soo kordhayay horumarada dhanka siyaasada,nabad gelyada ,dhaqaalaha iyo arimaha bulshada ee laga gaaray deegaanada Puntland.
DHANKA ARIMAHA BULSHADA
Marka la eego dhanka arimaha bulshada waxaa si weyn uga hirgelay puntland ururo dhalinyaro,hay’ado gaar loo leeyahay iyo shirkado kuwaasoo si madax banaan uga howlgala dhulka puntland iyagoo ka shaqeeya horumarinta arimaha bulshada.
Warbaahinta oo qeyb ka ah awooda bulshada ayaa la ogyahay heerka ay iminka ka gaarsiisan yihiin puntland kuwaasoo si madax banaan shaqadooda u wata inkastoo ay jiraan shuruuc dhanka sharciga kala xadeeya.
Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu marar badan amrey in kaalmo degdeg ah lala gaaro magaalooyin iyo deegaano puntlandka tirsan halkaasoo ay ka dhaceen dhibaatooyin dabiici ah.
Madaxweyne Faroole markii uu xilka soo qabtay ilaa iminka waxaa muuqda in dhaqaalaha horumaro badan laga gaaray xili Dowladu talaabooyin badan dhankaasi u qaaday si bulshadu dhaqaale ahaan mar kasta heer fiican u tigsadaan.
Bilo ka hor waxaa dhacday in sarifka doolarka uu hoos u dhac ku yimid taasoo suuqyada puntland saameyn ku yaalatay,balse xukuumada uu faroole hogaamiyo ayaa dadaal ay sameysay waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo sameynta ay yeelatay lacag yarida dhanka shilinka soomaaliya iyo hoos u dhaca doolarka ku yimid.
Siyaasada Madaxweynaha ee dhanka amniga waa mid iska muuqata maxaa yeelay sanado ka hoir Puntland waxaa saameyn badan ku yeeshay dagaalada dhanka siyaasadeed ku socda sida kan u dhexeeya Xoogaga Xarakada Alshabaab iyo ciidamada Puntland ilaa xad dagaaladaasi waxay noqdeen kuwo Dowladu xakameysay.
Inta badan magaalooyinka Puntand waxaa ka dhici jirey sanado ka hor dilal qorsheydan oo maalin kasta ama maalin loo maqli jirey,dabcan iminka waxaa muuqata inuu guuleystay dadaalkii xukuumada Faroole ee ka hortaga falalkaasi sida waalida u socday.
Ciidamada xoogga ee puntland waxaa la xasuustaa inay u suuragashay inay inta badan buuraha Golis ama Galgala ka saaraan xoogagii alshabaab ee ka dagaalami jirey kuwaasoo iminka sidii hore aan aheyn.
Sidoo kale la dagaalanka dhanka burcad badeeda Dowladu guulo muuqda ayay ka gaartay taasoo beesha caalamku ku amaantay iyadoo wixii maxaabiis ah ee kooxahaasi laga soo qabto marka la eego maraakiibta shisheeye ay u arkeen halka kaliya ee ay ku aamini karaan inay tahay Puntland.
Siyaasada oo ah tan ugu balaaran ee udub dhexaad u ah Dowlada Puntland ayaa waxaa la dhihi karaa waa aas aaska horumarka dowlada puntland marka la eego dhinacyada kale sida dhaqaalaha iyo amniga.
Madaxweyne Faroole mudada uu xilka hayo waxaa aad loogu xasuusan doonaa sidii uu gacanta uga gaystaybarnaamijkii roud map-ka ee lixda saxiixe iyo dhaqan gelinta dastuurka dalka.
Heshiiskii qariidada nabada oo sida la xasuusto ay wada saxiixeen Madaxweynihii Dowladii KMG ahayd Shariif,Sheekh Axmed,Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole,Shariif Xasan oo gudoomiye baarlamaan ahaa,Ra’iisulwasaare Gaas oo ra’iisulwasaare ahaa,Caalin oo madax ka ahaa maamulka Galmudug iyo hogamiye dhanka ahlu suna u saxiixay.
Ugu danbeyn Madaxweyne Faroole wuxuu horseeday oo uu ku muteystay amaan badan dhaqan gelinta nidaamka axsaabta badan iyo faderaaliisimka puntland iyadoo hada puntland ay ka jiraan ilaa lix urur siyaasadeed kuwaasoo dhawaan ku tartami doona awooda puntland.
Si kasaba waxaan leenahay qoraal laguma soo koobi karo wax qabadka muuqda ee dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Faroole iyadoo ay muuqato isbadalka uu sii galayo puntland.
Qalinkii Anas Cabdi
Faafintii shabakada wararka Puntlandvoice.com